Izibonelelo zomatshini wokusika i-CNC
Umatshini wokusika we-CNC, owaziwa njengezixhobo ezifanelekileyo zemveliso yefenitshala. Njengoko igama lisitsho, zonke iinkqubo zokulayisha, ukusika, ukumba umngxunya ngokungqengqelekanga kunye nokufakwa kwezinto kwipleyiti kugqitywa kwindawo enye. Ibeka endaweni eyiyo imveliso yemanyuwali kunye nokusebenza. Ke, zeziphi izibonelelo ezibalulekileyo kunye neendlela zokulungisa umatshini ongenanto i-CNC yokusetyenziswa kwezixhobo zefanitshala zokwenziwa kwefanitshala? Namhlanje iJinan JCUT inkampani ye-CNC yezixhobo ithatha iimveliso zomzi mveliso wethu njengomzekelo wokuzazisa ngokweenkcukacha.
1. Umatshini wokusika i-CNC unokuphucula kakhulu umgangatho wokusetyenziswa kweeplati. Uyilo lwefanitshala lugqityiwe ngokupheleleyo yikhompyuter. Ngokwefanitshala eyilelweyo, idatha yokusetyenziswa kwebhodi inokufunyanwa ngqo, emva koko ibhodi inokuncitshiswa ngokufanelekileyo kwaye iphononongwe ngokusebenzisa isoftware yokuphinda ilungiswe. Umgangatho wokusetyenziswa uphezulu kakhulu, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-95; Umatshini wokusika usebenzisa i-milling cutter yokusika, onokuthi ujike kuwo nawuphi na umkhombandlela kwaye usike imilo ekhethekileyo. Itafile yesilika yokutyibilika kufuneka inqunyulwe kude kube sekupheleni, kwaye umgangatho wokusetyenziswa kwephepha usezantsi kakhulu. Inkosi yetafile etyibilikayo ibona isenza umlinganiso kunye nokusika kwetayile ngokwendlela yokuzoba.
2. Umatshini wokusika i-CNC ugcina iindleko zabasebenzi. Umgca wokuvelisa ifanitshala ozenzekelayo unokusebenza ngokupheleleyo kwaye usetyenziswe ngumntu omnye, kwaye ukuba umgca wokujikeleza webhendi ojikelezayo usetyenzisiwe, umsebenzi unokusebenza ngokupheleleyo aze awusebenzise ukusuka ekusikeni ukuya kumda obekiweyo. Itheyibhuli yokutyibilika ifuna ukuba okungenani abasebenzi babini ukuba basebenze, ubuncinci inkosi enye ikhokelela ekuqeqeshweni, kwaye amandla okusebenza aphezulu, kwaye ukuphathwa kwabasebenzi abanobuchule nako kunzima. Inxulumene nokuthunyelwa kwemini yonke, ayinakufumana kwisinye kwisithathu sokuqala kwe-CNC.
3. Isantya sokusebenza somatshini wokusika we-CNC ukude ngokuthelekiswa nesarha yetafile etyibilikayo. Umgca wokuveliswa kwefanitshala yeefenitshala ezizenzekelayo yinkqubo eqhubekayo nengaphazamiseki, kunye ne-CNC yokulungisa okuzenzekelayo; ngelixa itafile etyibilikayo ibona kufuneka ichukunyiwe kwaye imisiwe, kwaye ibhodi ijikeleziswa, nto leyo iyinkcitho yexesha kunye nomsebenzi. Ukuba uhlengahlengiswa ngokungalunganga, umyinge wempazamo uphezulu kakhulu.
4. Indawo yokusebenzela umatshini wokusika i-CNC ilungile kakhulu. Isixhobo esinamandla sokutsala uthuli somatshini wokusika kunye nesixhobo somatshini esifanelekileyo saphantse sasebenza ukufezekisa ukususa uthuli; Ukuthetha, uthuli lwetafile etyibilikayo likhulu kakhulu.
5. Umatshini wokusika i-CNC wamkela ukusebenza kobudenge kunye nokusebenza, konke kubalwa ngekhompyuter, ukungaphumeleli kwe-zero kunye nephutha le-zero. Umsebenzi ulula. Emva koqeqesho olulula lwetekhnoloji yethu, inokusetyenziselwa ukusebenza, kwaye ikhuselekile kwaye ayinabungozi. Itheyibhuli yesilayidi isebenzisa ukubala okwenziwa ngesandla ukunqanda iimpazamo ezahlukeneyo. Itafile etyibilikayo iyingozi kakhulu kwaye ayilunganga. Inokubangela ukwenzakala komntu.
Konke kuyo yonke into, nokuba ivela kwiindleko zokuqhubekeka, okanye umgangatho wokulungisa, iteknoloji yokulungisa umatshini wokusika i-CNC ayinakuthelekiswa nesaliti yetafile etyibilikayo. Le yingcambu yomatshini osika ngoku we-CNC aziwa kakhulu ngabathengi.